Mira pamapfudzi emahofori uye uite mukuvandudza
Iyo yekugadzira tekinoroji yepurasitiki inochinjika yekupakata indasitiri yakave yakakura pamwe nemakore ehunyanzvi. Sezvo isu tese tichiziva, kufuridzirwa firimu ndiyo yekutanga nhanho mukugadzirwa kwepurasitiki firimu. Semunhu anoshanduka kurongedza opareta anga ari mubhizinesi kweanopfuura makore gumi, LGLPAK LTD. yakanyatso chengetedza iyo firimu yekuvhuvhuta maitiro, uye pane iyi hwaro, inosanganiswa nezvayo zvigadzirwa kuti igadzirise uye kugadzirisa. Kuzadzisa chinangwa chekugadzirwa kwemhando yezvigadzirwa.
Yakaridzwa firimu inzira yepurasitiki yekugadzirisa, iyo inoreva tekinoroji yekugadzira mapurasitiki umo mapurasitiki anopisa uye anonyungudika obva afuridzirwa kuita firimu. Iko kunaka kweiyo firimu zvinhu inopepereswa neiyi nzira kunoenderana nefirimu yekuvhuvhuta muchina uye epurasitiki zvidimbu. Semuenzaniso, iyo bhaisikopo rakapeputswa nekambani yedu ine brand-nyowani zvinhu zvine yunifomu ruvara, yakachena, uye yakanaka kutambanudza kwechigadzirwa chakapedzwa. Nekudaro, kana zvidimbu zvepurasitiki zvakagadzirwa zvekare nemapurasitiki epurasitiki akagadzirwa kuita mafirimu, pigments inowanzo kuwedzerwa, uye mafirimu akapera anogona kunge aine mavara asina kuenzana, brittle uye asina kusimba.
Iyo firimu yekuvhuvhura maitiro inotanga nekuwedzera yakaoma polyethylene zvidimbu mune yepazasi hopper, uye inopinda iyo screw kubva kune hopper nehuremu hwezvimedu. Kana mapellets achibata iyo yakashongedzwa bevel, iyo inotenderera bevel inotarisana nepurasitiki uye inoenderana kune iyo bevel pamusoro. Iko kusundidzira simba kunosundira epurasitiki zvimedu kumberi. Mukufamba kwekufamba, nekuda kwekukonana pakati pepurasitiki uye sikuruu, ipurasitiki nedhiramu, uye kubonderana uye kupesana pakati pezvimedu, zvakare zvinonyungudika zvishoma nezvishoma nekuda kwekudziya kwekunze kwedhiramu. Ipurasitiki yakanyungudutswa inosvinwa nemusoro wemuchina kuti ubvise tsvina kubva padanda refa. Mushure mekutonhora, inflation uye traction, iyo yakapera firimu inozopedzisira yakungurutswa kuita chubhu.
Nekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji uye nekuenderera kuri kuvandudzwa kwezvido zvevanhu, iyo firimu yekuvhuvhuta maitiro inoramba ichivandudza, uye matatu-masara co-extrusion firimu yekufemera maitiro akaitwa zvakare. Yedu yekambani nyowani nhatu-rukoko co-extrusion yakavhuvhuta firimu yekugadzira mutsetse inotora mhando nyowani yepamusoro-inoshanda uye yakaderera-simba extruder unit, Iine advanced technology senge fotoelectric otomatiki kururamisa mudziyo, otomatiki ichitenderera uye firimu makakatanwa kudzora, uye komputa screen otomatiki kudzora system. Inofananidzwa nemidziyo yakafanana, ine zvakanakira kukwidziridzwa kwepamusoro, yakanaka chigadzirwa kugadzirwa kwepurasitiki, kushomeka kwesimba kwesimba, uye kushanda kuri nyore. Iyo inogadzirisa zvakakwana matambudziko emufirimu ruffles uye kudzoreredza saizi, uye inounza chigadzirwa mhando kune nhanho nyowani.
Kana hunyanzvi hwekufema firimu tekinoroji ichifambiswa nehofori yesainzi uye tekinoroji, saka, iyo Oreo dhizaini yakapepereswa firimu yakapayona nekambani yedu pahwaro hwetatu-nhanho co-extrusion maitiro ndeyekuvandudza pamapfudzi egiants. Isu tinoisa mukaka chena zvinhu Pakati, iyo colour masterbatch inoiswa pamativi ekunze, ayo asingangochengetedze hunhu hwemafirita matatu akabatanidzwa akaburitswa firimu, asi zvakare inoderedza mutengo weiyo color masterbatch, uye inovandudza aesthetics uye kufukidza kune kukwirira kutsva.
Pamberi pehunyanzvi hwehunyanzvi, isu tiri ivo vanobatsirwa, isu tiri vashoma kwazvo, asi hatityi kumira pamapfudzi ehigiants kuti vagadzire, nekuti isu tinotenda kuti zvidiki zvigadzirwa zvinogona zvakare kuita budiriro huru!
Post nguva: Aug-19-2021